စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေးထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း | တရုတ်စက်မှုပြန်ကြားရေးစက်ရုံ
AC အ contactor ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဝိသေသလက္ခဏာများ
အချိန် post: 09-02-2016
1, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအမျိုးအစားများအတွက် contactor, action ကိုဖွဲ့စည်းပုံတိုက်ရိုက်ရွေ့လျားမှုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, အဆက်အသွယ်အချက်နှစ်ဆချိုးအချက်ဖြစ်ပါသည်, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, အလင်းအလေးချိန်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်, လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး; 2, ပု contactor မီတာရေးစပ်နိုင်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အပူ relay ကိုကျော်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမ
အပူ relay ကို၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမအပူဒြပ်စင်သို့စီးဆင်းလက်ရှိကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အပူဖြစ်ပါသည်, ထို bimetal ဒါကြောင့်တွန်းအားပေးလှံတံရွေ့လျားအပေါ်တစ်ဦးအခြို့သောအကွာအဝေးအထိရောက်ရှိသည့်အခါပုံပျက်သော, ထိန်းချုပ်မှု circuit ကိုအဆက်ပြတ်သောအခါ, ချဲ့ထွင်ပုံပျက်သောကွဲပြားခြားနားကိန်းရှိတယ် t ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့, DC contactor?
ပထမဦးစွာနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း: 1, DC contactor အမျိုးအစားဝန်လက်ရှိအမျိုးအစားနှင့်ဝန်၏အလင်းအလေးချိန်နှင့်အညီရွေးချယ်ထားသည့်ရပါမည်, အကြောင်း, AC အသို့မဟုတ် DC ကဝန်ဖြစ်ပါသည်, အလငျးဝန်ဖြစ်ပါသည်, အထွေထွေဝန်သို့မဟုတ် လေးလံသောဝန်။ PN မော်တာထက်ပိုပြီးအဓိကအဆက်အသွယ်အတွက်တွက်ချက်ရနိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အပူ Overload နိယာမအလုပ်လုပ်ထပ်ဆင့်လွှင်?
အပူ relay ကို၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအချိန်နှင့်အပူ relay ကိုအဖြစ်ပြောင်းပြန်အချိန်အပြောင်းအလဲမော်တာ Overload ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အရွယ်အစားသည်နှင့်အညီ, မော်တာပုံမှန်စတင်နှင့်ပြေးမထိခိုက်သည်အာမခံပေးရမည်, နှင့်မော်တာ၏စွမ်းရည်, ဒါအဆိုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်လက်ရှိဝန် ၏ဝိသေသကွေး ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 08-29-2016
လုံခြုံရေးအကြောင်းကြား: အတပ်ဆင်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေး, စစ်ဆင်ရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ဂရုတစိုက်ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ၏ကုမ္ပဏီ၏စီးရီးကိုဖတ်ရန်သေချာစေပါနှင့်တိကျမှန်ကန်တပ်ဆင်ခရဲ့ contents အပေါ်ညွှန်ကြားချက်, ထုတ်ကုန်၏အသုံးပြုမှုနှင့်အညီပါ။ 14700274686957991.jp ...ဆက်ဖတ်ရန် »
စက်မှုဇုန်, Liushi မြို့, Yueqing စီးတီး, ZhejiangProvince
ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call: 0577-62756010